Ụlọ ọrụ na -emepụta nri nri China na ndị na -eweta ya | Na mbụ
Anyị nwere ụdị nnukwu nri dị iche iche, gụnyere ụlọ nri CZ, mmanya VF Feed, mmanya nri AZ, mmanya FD, mmanya VT Feed, mmanya VG nri, mmanya VC, mmanya VE Feed, ihe nri nri bụ SCM415, mgbe carburizing and quenching, hardness HV> 650, na -enwe akwa na -eguzogide ma na -esi ike n'ime, ekwesịrị ịchịkwa ịdị larịị nke etiti ezé ọ bụla n'ime 0.01mm, na ekwesịrị ịchịkwa ịdị elu ya n'ime RA0.2. Ngwakọta ọla kọpa nwere ikike nchekwa mmanụ nke na-ahụ maka mmanye ka mma maka ngwa nri ndepụta anyị na oke ọsọ. Ogwe nri anyị bụ otu ihe ahụ Yamato dị na mbụ. Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ịnye mmanya nri Shing Ray 787 na 720, ha abụọ bụ ezigbo mma.
Original accessoreis Co., Ltd nwere ike inye ndị ahịa ihe karịrị 90% nke ngwa ngwa mbụ nke akara Yamato, yana ngwa niile. Onye njikwa afọ iri na abụọ, ọ nwere ezi nghọta nke sistemụ mmepụta akụkụ ahụ niile na China, ma nwee ike nye ndị ahịa akụkụ mbụ nke ụdị igwe ịkwa akwa dị iche iche emepụtara na China.Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa Yamato, chọọ Ningbo Original Accessories Co ., Ltd. Maka ụdị nnweta ika ndị ọzọ ewezuga ngwa Yamato, ndị ahịa chọrọ nnukwu na ngwa mbụ nwekwara ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị.
Anyị nwere ikike mbubata na mbupụ ma nwee ike nye ndị ahịa ọrụ otu nkwụsị. N'otu oge ahụ, iji hụ na '' ogo mbụ '' anyị, anyị nwere ngwa nyocha zuru oke na ndị nyocha nwere ahụmịhe. Ogo bụ ndụ anyị, anyị na-esokwa ya mgbe niile.NingBo Original Ngwa Co., Ltd ezigbo bụ iwu ụdị klaasị mbụ nke ngwa ụwa. Anyị na-atụ anya ịmatakwu ndị ahịa dị elu na ndị mmekọ gburugburu ụwa iji mepụta agbụ ụlọ ọrụ ihe eji akwa akwa.
Nke gara aga: Akụkụ igwe eji akwa akwa Yamato - K2 SUPTIP 6201022 - nke mbụ
Osote: NKWUKWU UGBUA
Industrial ewkwa Akwa Ngwa
Industrial ewkwa Akwa Machine Parts
Onye na -eweta akụkụ Yamato
Looper, efere Stich na nkịta nri